Fametrahana ny fototra fanorenana 'Fuck John de Mol': Martin Vrijland
Dia izay be no nahazo valiny momba John de Mol ny fiantranareo mpihaza antsoina hoe Fanomezan-dàlana milina, izay mpitoraka blaogy maro manahirana amin'ny fitarainana ny fahazoan-dalana zo hampiasa sary, dia toa mahasoa ahy mba hanomboka ny asa mifanohitra. Na dia eo aza aho ny taratasy farany izay nosoratako ho an'ireo Rosalin'ny Nedland, dia mbola tsy nahazo valiny, toa ireo mpitoraka blaogy marobe no noteren'izy ireo handohalika ka tsy maintsy navoaka ny vohikalany. Fantaro fa ireny matetika no mpitoraka blaogy mahantra indrindra, izay maniry fotsiny ny tsy hino sy hampiasa sary fotsiny mba hampisehoana ny lahatsoratr'izy ireo, heveriko fa misy dikany ny mahita raha afaka miresaka mivantana amin'i John de Mol.
Misy, araka ny hevitro, ny vintana tsara ahafahantsika manakana ny fanao nataon'i John de Mol. Izany no nanome ahy ny hevitra hananganana fototra iray izay ahafahantsika mitaky fanambarana amin'i John de Mol.
Tena misy izany fahasimbana izany. Etsy an-danin'izany, i John de Mol dia nitarika tsikombakomba manohitra ny teny maimaim-poana, amin'ny fanafoanana ilay lehilahy madinidinika amin'ny ady ara-bola. Manao izany izy amin'ny alàlan'ny fananana orinasa momba ny Fahazoan-dàlana Grika any Belzika manao 'tolo-kevitra' izay tsy misy ifandraisany amin'ny tolo-kevitra, fa izy ireo dia mikasika ny fanenjehana. Tsy irery ianao tsy misy fampandrenesana mialohasaingy ianao koa dia voatery manaiky ny 'tolokevitra'. Tsy ara-dalàna izany, satria ny fitsipiky ny soso-kevitra dia midika fa misy ny fifanakalozan-kevitra na fandavana. Ny zava-misy dia nahazo sonia taratasy tsy misy adiresy avy any Rosmalen Nedland izay tsy mba noraisiko mihitsy, tsy hoe manan-danja ihany, fa koa mampiavaka ny fametavetana (jereo ny taratasy etsy ambany). Izany rehetra izany dia ny fikasana hanamboatra vahaolana ara-dalàna aorian'izay. Tsy nahazo fampitandremana mihitsy aho hatramin'izay! Ity taratasy ity dia tokony hanome ny fahatsapana fa nitranga izany. Fomba tsy mahazatra! (Vakio eo ambanin'ilay taratasy)
Ny alalan 'izany, dia tiako niharan'ny fitondrantena ratsy rehetra ny mpamaham-bolongana na ny mpandraharaha ny tranonkala izay niharam-boina ireo fanao mampirisika antsoy aho mba hitondra ny anarako (ny voalohany na ny farany anarany isika) ao amin'ny famantarana gmail.com (raha tsy ny asa fifandraisana) . Toa hery ilaina mba hiaraka amin'ny endrika ny famoronana ny fototra izay manangona filazana ny alalana rehetra Machine ary hadihadiana ny fahasimbana, ary avy eo dia tsy mba hamafa ny filazana latabatra, fa mba hametraka koa ny manohitra ny fitakiana . Izany dia tokony hitarika amin'ny famerenana indray ireo tranonkala ireo sy ny fitakiana ny fahavoazana ara-moraly, ara-pihetseham-po ary ara-pahasalamana.
Mazava ho azy fa ady amin'i Davida - Goliath izany, saingy isika rehetra dia mahafantatra hoe iza no nandresy tamin'ilay ady. Mieritreritra aho ny hametraka fototra iray antsoina hoe 'Vidin'ny Fuck John de Mol's Permission Machine'. Ny vidim-piorenan'ny fototra tahaka itony dia vola zato isan-jato, saingy azontsika atao kosa ny milaza fa i John de Mol tenany ihany no hiverina. Tiako ny hampirisika ireo mpisolo vava izay mahatsiaro ho nandray anjara tamin'ity ady ity mba hifandray aminay. Mazava ho azy, ireo mpanafika sy trolls dia mety miezaka ihany koa manilika an'ity hetsika ity, saingy afaka miantehitra amin'ny fisintonana malalaka izy ireo, noho izany dia manoro hevitra mafy aho.
Andao hanomezana vola an'arivony John de Mol lesona momba ny fanoherana ny fanevatevana. Ny fahalalahana maneho hevitra dia efa eo ambany fanerena mavesatra ny efa voavitrana ny mahery fihetsika isan-karazany sy ny saina diso hoaxes ao amin'ny vohikala sy ny media sosialy, manao diso alibi ho an'ny sivana noforonina, ka io ady ara-bola mendrika manohitra.
Azoko tsara fa amin'ny maha-marionety ny filaminana niorina ianao dia afaka mandoko ny fomba fijerin'izao tontolo izao ny vahoaka Holandey amin'ny alemana Nederlands Persbureau (ANP - an'i John) ary amin'ny alàlan'ny fantsom-pahitalavitra lehibe anao (Talpa), fa raha mikendry tsara ilay lehilahy manana ny pendulum dia maty ny fiantraikany. Fotoana izao ho an'ny mpanohitra ary izany dia azo atao amin'ny fidirana amin'ny tafika.
Ahoana no ahafahanao, amin'ny maha miliaridera azy, ny hahazo vola bebe kokoa aminao manoloana ny lohan'io lehilahy io? ..
Vakio ny lahatsoratra teo aloha eto, eto, eto en eto
Tags: ANP, Lele, Pitsarana, john de mol, fahaleovan-tena, Rosmalen Nedland, fototra, talpa
6 Novambra 2018 ao amin'ny 01: 01
Molomà toy ny rat dia tia miasa ao anaty maizina ...
Xandra nanoratra hoe:
6 Novambra 2018 ao amin'ny 03: 44
Heveriko fa ny vola dia tsara kokoa handaniana, satria tena ady tokoa i Davida sy i Goliata. Ao amin'ity firenena ity dia tsy momba ny mety aminao, fa raha marina ianao. Ny lalàna momba ny raharaha ao Holandy dia simba. Ara-dalàna ny fampianarana. Amin'ny maha olom-pirenena tsotra anao, tsy handresy ireo antoko izay lehibe kokoa (matanjaka kokoa) na manan-danja kokoa eo imason'ilay mpitsara.
6 Novambra 2018 ao amin'ny 08: 56
Afaka manao izany mangarahara izany isika avy eo
6 Novambra 2018 ao amin'ny 10: 05
Tena mendrika izany koa!
6 Novambra 2018 ao amin'ny 06: 55
Maka salom-borona aho, satria azo atao izany.
Frank van Vloten, aka 'The Black Devil', dia milalao miaraka amin'i Prins Hendrik ny andraikitra fototra ao anatin'io fikomiana an-trano io.
Ho an'ny ambiny, tsy mieritreritra ny hametraka ny patalohany ho an'i dadatoan'i Johnny, Ome Martin fotsiny manao izany, ho fanomezam-boninahitra azy.
Manontany tena aho hoe iza amin'ireo tranonkala mbola mijanona izay te handray anjara betsaka amin'ny an'i ome Martin dia hodorana tsara, isika dia hiaina izany.
6 Novambra 2018 ao amin'ny 08: 59
Eny, ekeko fa nokarama vohikala fanoherana vitsy aho ... izay mahagaga, tsy mijaly noho ny fanambarana avy amin'ny dadatoan'i John
6 Novambra 2018 ao amin'ny 08: 55
Ary tsara loatra izany raha tsy miresaka, ny anjely (tena) dia miseho any amin'ny orinasa misokatra Amerikana, ankehitriny fantatrao ny fifidianana,
Vehivavy iray nirodana tamin'ny famoriam-bolan'ny Filoha Trump tany Missouri androany hariva, ary fotoana fohy taorian'ny nidiran'ny vahoaka tao amin'ny 'Amazing Grace'. Manantena aho fa tsy afaka mino ny hetsika Hillary Clinton. Misy fahagagana atao eto, amin'izao fotoana izao.
Andriamanitra dia mitahy ny Patriotsa ary ny filohantsika. Ary misaotra an'Andriamanitra any an-danitra fa i Hillary Clinton dia tsy ao amin'ny trano manga, satria mety ho "afobe ety an-tany".
Tsy reraka aho.
6 Novambra 2018 ao amin'ny 09: 45
Izany dia ohatra mahafinaritra amin'ny fomba fampiasan'ny media sy ny politika amin'ny fampielezan-kevitra. Mazava ho azy, ity fihetsika iray manontolo ataon'ny vehivavy iray ity dia mifanohitra tanteraka amin'ny laharana voalohany sy ny fihetsiky ny maherifon'i Trump amin'ny antso ho an'ny dokotera ho an'ny tononkira mahagaga avy any amin'ny z. Ahoana no ahafahanao mametraka olona ho mpamonjy? Ary toy izany koa:
PeterB nanoratra hoe:
12 Novambra 2018 ao amin'ny 11: 21
Na ahoana na ahoana, tsy hijery ny zavatra rehetra i John de Mol miantso antsika (izany indrindra, indrindra ny fandaharany amin'ny fahitalavitra).
Nijanona ihany koa aho hividy gazety, izay saika teo am-pelatanan'ny Biraon'ny Gazety roa Belzika.
12 Novambra 2018 ao amin'ny 11: 23
Eny, fantatsika rehetra izany, fa zava-dehibe izao ankehitriny izao fa mihamazava fa ny haino aman-jery hafa dia voafehy tanteraka.
Vakio ity ary jereo ireto horonantsary ireto:
Patrick de Vries nanoratra hoe:
12 Martsa 2019 ao amin'ny 09: 23
Indrisy anefa fa nandoa vola aho. Tsy mahagaga izany fa ny fandrahonana avy amin'ireny bastards ireny ary izany no 2de ahy. Voalohany amin'ny bilaogy. Faharoa ihany koa tamin'ny alàlan'ny bilaogy iray, saingy nieritreritra fa nesorina tao amin'ny rafitra ny sary. Betsaka ny sandan'ny vola toy izany amin'ny karama toy izany ... Aiza ny any amin'ny fiarahamonina? Manantenà fa miaraka amin'ny ady amin'i Martin dia hisy ny lalàna (AND lalàna momba ny lalàna) mba hahafahanay manoratra bilaogy momba izany. Indrisy anefa fa najanoko ny blaogy ...... .. snif snif
« Ny 'mpampihorohoro dia mijanona lavitra' avy amin'ny AIVD
Ny fampielezan-kevitry ny Red Cross dia 'fanasokajiana ny lozam-pifamoivoizana mba handrarana' filalaovana fanararaotana ny polisy '? »
Total visits: 12.917.139